Oomama bakhe abaselula banqwenela ukugqoka abantwana babo ngendlela yokuqala kunye nefestile. Kwaye oku akuwona msebenzi onzima, ukuba sithatha kwaye senze ezinye izinto, ngokomzekelo, ukubopha ingubo yomntwana. Lo ngowomnye wemisebenzi elula, kunokwenzeka nokuba ngumqambi wokuqala. Ukongezelela, imveliso iya kuba yodwa kwaye iyingqayizivele, ngexesha lomsebenzi uza kufaka ucezu lwakho nothando kunye nokufudumala kwaye umntwana wakho uya kuhlala exelela abahlobo bakhe ukuba le nqanawa iboshwe ngumama.
Ukudibanisa ngokufanelekileyo i cap, kufuneka uqwalasele amanye amaphupha. Intambo kufuneka ibe yendalo nje, ifanele isetyenziswe ngetayi yemvelo, ngaphandle koko le ntsimbi iya kubangela ukucaphukisa isikhumba okanye ukungabikho komzimba. Imicu yeefowuni zezingane kufuneka ikhethwe ngokwexesha lexesha. Ebusika nasentwasahlobo, kufuneka uthathe intsimbi yoboya okanye uboya beboya. Ngehlobo, uza kufumana i-garus, iris, i-cotton thread. Ukusuka kubo umntwana wakho akayi kukhupha. Amanyathelo okuchanekileyo kufuneka agwenywe.
Ukuba uya kubopha ingxowa yabantwana ngexesha lokubanda, ke kungcono ukhethe umzekelo oqinileyo wokubamba, awuyi kudlula umoya obandayo kwaye uya kuba ngcono ukushisa. Ingxowa ngeendlebe eziza kuhlanganiswa phantsi kwe-chin is best. Iimpawu ezinokuzilungelelanisa kunye nezilungeleleneyo ze "helmet" kunye "nokugcina impahla." Zilula kwiindlela zokubamba kwaye zilungele intloko yomntwana.
Kulula ukubopha ikomfa labantwana kunye neenaliti zokudibanisa. Oku kunokwenziwa kokubili kwiintetho ezintlanu, kunye nakubini. Yenza ngokukhawuleza kwaye ulungele ngokukhawuleza i-cap, ukuba usebenzisa indlela yokukhwela iisokisi kunye ne-mittens, ngoncedo lwezikhulumi ezintlanu. Iinqwelo zebhinqa ezifudumele kunye neyokuqala zingenziwa kunye neprothem ngeendumiso. Kule meko, iifayili ezivela emaceleni ziya kubonakala ngaphakathi kwemveliso. Baya kuthi baninzi bafaka i-cap kunye nokunceda ukugcina isimo semveliso.
Inguqu yokuqala yesikhombi sezingane
Kuba i-cap yezingane iya kufuna i-100 gram ye-mohair okanye i-wool ye-natural fluffy kunye neenaliti zokudibanisa. Intambo ingaba i-melange kunye ne-monophonic. Sidibanisa i-cap nge patheni elula ye-elastic band 2x1 (ii-loops zobuso kunye ne-1 purl). Silinganisela intloko yentloko yomntwana nge-tenti yecentimeter kwaye sibalo inani leetopski eziyimfuneko kwisethi. Emva koko siza kuluhlula iitshizi kwiinaliti zokudibanisa kwaye ubophe umgca we-35 cm high. Hlaba okanye ukhonkceze umgca wecala kuqala, ngoko umgca ophezulu kwaye ngenxa yoko siza kufumana i-cap ephezulu ngeendlebe, siya kuthunga iipompomom, iikotels okanye i-pigtails kubo. Ukuba sidibanisa i-cap yale modeli kwi-setyhula yokudibanisa iinaliti, ngoko ke sithola esinye sondlo.
Ingqungquthela yesibini ye-cap knitted children
Kukhona inguqu elula ye cap kunye ne-lapel. Sifaka ama-oral angama-90 ekudibaneni iinaliti, sidibanise ne-band 2x2 (ebusweni bombini, ii-loops ezimbili), oku malunga ne-25 cm, ngoko ke sinciphisa kancane amathangi ukuze senze i-cap. Kwimiqolo engaphambili, sidonsa ii-loops ezi-2 kunye nendawo nganye yesi-6. Kwisinye isiqalo sombuso, sibonkcela ii-loops ezimbini kunye nombolo nganye yesi-5, kwelinye ilayini - kwi-3 loops kunye ne-2-loops. Ngaloo ndlela, kuya kubakho iingubo ezili-17 ezisekhohlo. Siza kuziqokelela ngentambo ephindwe kabini kwaye siyiqinise. Emva koko sithunga okanye sibophe umgca wecala lesikhumba ngekhonto kwaye wenze i-lapel. Siyidonsa ipomppon okanye ibrashi ngomtya.
Ukudweba "iNtyambo kwiVase" kwiinqanaba zabaqalayo. Indlela yokudweba i-pencil bell ipensele - iingcebiso kubantwana
Indlela yokuphendula ngokufanelekileyo ukugxekwa
I-Croutons ne-garlic sauce
I-psychological positive njengezikhokelo
I-Pugacheva ineengxaki ezinkulu zempilo
Yintoni umfazi ayenokuyicinga ngomntu
Isidlo esiphuthumayo semvubelo
Isaladi kunye ne-beet, ushizi kunye ne-herring